आम ह’ड्ताल उल्लंघन गरेको भन्दै सुमो तोडफोड ,चालकले रुँदै गाडी सुम्सुम्याए ! – News Nepali Dainik
आम ह’ड्ताल उल्लंघन गरेको भन्दै सुमो तोडफोड ,चालकले रुँदै गाडी सुम्सुम्याए !
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ २२, २०७७ समय: ९:५०:०६
प्रतिगमन वि’रुद्ध भन्दै माधव-प्रचण्ड समूहले गरेको नेपाल बन्द गरिब रुवाउने बाटो भएको छ । यसैबीच प्रचण्ड-माधवका कार्यकर्ताले काठमाडौंको गोंगबुमा टाटासुमो तो’डफोड गरिदिएका छन। आम ह’ड्ताल उल्लंघन गरेको भन्दै सुमो तोडफोड गरिएको हो ।
मुख्य सडक आसपासमा पसल खुलेका छैनन् भने भित्री क्षेत्रका पसल व्यवसाय सन्चालनमा छन् । बन्दकर्ताले आत्यावश्यक सेवाका सवारीलाई सन्चालनमा रोक नगर्ने बताएका छन्। आज बिहानै बन्दकर्ताले गोंगवुमा ट्याक्सीमा आ’गजनी गरेपछि सार्वजनिक सवारीमा जो’खिम बढेको छ । कलंकीमा ब’न्द सफल पार्न हिँडेका नेकपा स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य सहितका केहि नेतालाई प्रहरीले गि’रफ्तार गरेको छ ।
Last Updated on: February 4th, 2021 at 9:50 am